Buyela Ehlathini Nombhalo Ozayo We-Blair Witch Project - I-iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Buyela Emuva Emahlathini Ngedokodo Lezinto Ezizayo zeBlair Witch
Buyela Emuva Emahlathini Ngedokodo Lezinto Ezizayo zeBlair Witch
ebhalwe ngu admin February 17, 2015
Noma uyayithanda, uyayesaba noma uyayizonda, akunakuphikwa lokho Iphrojekthi yeBlair Witch ingenye yamafilimu anethonya elikhulu futhi aqopha umlando emlandweni we-horror. Ikhishwe ngo-1999, ifilimu enesabelomali esiphansi idunyiswa ngokuqalisa uhlobo olutholakele lwama-video - futhi sikukhuthaza ukuthi ungayisoli ngamakhophi ayi-10,001 eza ngemuva kwawo!
Kunamafilimu ambalwa asabisayo anezethameli ezisabise ngokweqiniso ngaphezu kwalokho Iphrojekthi yeBlair Witch, eyayinomkhankaso omuhle kakhulu wokukhangisa kangangokuba abaningi ekuqaleni babenesiqiniseko sokuthi kwakuwumsebenzi ongewona owamanga. Noma-ke manje sesilazi iqiniso, kusabeka ngokwesabekayo njengakuqala, cishe eminyakeni engamashumi amabili kamuva.
Ngenkathi silinde Iphrojekthi yeBlair Witch 3, kuvele nje ukuthi idokhumentari mayelana nefilimu yokuqala isendleleni. Ngokufanelekile okunesihloko I-Woods Movie, idokhumenti yobude besici izokuthatha ekusithekeni kokwakhiwa kwefilimu eyisithonjana, inikeze ukufinyelela okungakaze kube khona kulo mkhuba.
Nakhu ukuqothulwa kwesakhiwo okusemthethweni:
Ngo-Okthoba 1997, iqembu labenzi bamafilimu langena ehlathini laseMaryland ukuze likhiqize i-movie ezethusayo ezimele. IPROJEKTHI YOBUTHI BLAIR izoba yinto yomhlaba wonke futhi yaqala uhlobo “lwemibhalo etholakele” olusalokhu lusebenza ngamandla nanamuhla. Manje, ngokokuqala ngqa, uyabona ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi lowo owaphula amarekhodi aqhekeze umhlabathi. Kusuka ekurekhodweni okungakaze kubonwe ngaphambili kwemihlangano yangaphambi kokukhiqizwa, amateyipu wokuhlola, nemidwebo yokuhlola kuya ekudutshulweni kwangempela, ukuhlolwa kuqala kokubuka kuqala, nokumaketha eSundance Film Festival, zonke izisebenzi ezibalulekile zikuqondisa ezingxoxweni nasezinqumweni ezenziwe ukwethuka ukuzwa zakudala.
Bheka i-trailer ye-doc engezansi, esethwe ukuthi iqale ukukhonjiswa kulo Agasti ozayo e-FrightFest Glasgow.
Newiphrojekthi ye-blair witch
Okuthusayo Kubuyela Ekhaya: Februwari 17, 2015
Qaphela Izilo Zasemkhathini Zezinye Izizwe: Iqiniso Likhombisa Ukuthumela Izidalwa Zabantu KuMars